Muunganidzwa Wemakotesheni Kubva 'Mumwe Kunze' Nezve Hupenyu Hunoenda Kwakadzika! - Zvimwe
Muunganidzwa Wemakotesheni Kubva 'Mumwe Kunze' Nezve Hupenyu Hunoenda Kwakadzika!
Mumwe Outs anotora mazwi yakatorwa kubva mumavara:
Mumwe Kunze iyo yemitambo anime ine muyero we 'kubhejera' yakawedzerwa kune musanganiswa.
Nezvinhu zvepfungwa uye nehungwaru hwekufunga, pane dzimwe nguva dzakadzika dzinounza makotesheni isu tese tinogona kuenderana nekunzwisisa.
Ngatitarisei pamashoko iwayo mune ino posvo.
Iye Mukuru Pane Outs Quotes.
“Zvinorevei kuva mukundi? Ndiyo yekupedzisira yakamira here? Zvinoreva kukwira pamusoro pegomo rezvitunha kuti usvike kumusoro. Izvo hazvisi izvo zvine mbiri kuona kuona, muchokwadi, kune hutsinye hwakanyanya. Kunyange zvakadaro, kana uchiri kuda kutsvaga kukunda… saka unofanira kuva dhiyabhorosi. ” - Toua Tokuchi
'Chii chinobatsira kutarisa kune zvakapfuura?' Kana dhata rapfuura richireva chokwadi ... saka 33,1 muzana yedu yekukunda gore rapfuura zvinoreva kuti hatifanire kunge tichitamba nevafambisi vezvikepe uye yavo inokwana 66,7 muzana. ” - Toua Tokuchi
'Kana munhu achikunda ndipo paanonyanya kutambura.' - Toua Tokuchi
'Avo vanoshandisa kubiridzira sechombo chavo, vachadzipwa nekubiridzira pakupedzisira.' - Toua Tokuchi
“Kana ukaparadza tafura yomumwe yesirivheri, unofanira kuripa nendarama. Mutungamiri wenzvimbo inogadzira inosvibisa anofanirwa kugara padivi pechimichi chemuti. Ndizvo zvinoreva kutora mutoro. Zvisinei vanhu vari munzvimbo dzinonzi dzakakwirira havawone mhedzisiro yacho. Kana zvikanganiso zvikaitwa, vanobva vakotamisa misoro yavo nekukumbira ruregerero. Vanofunga kuti zvakakwana. Uri mumwe wavo futi? ” - Toua Tokuchi
“Kuhwina mutambo hakunei nekupfuura vavengi vako nesimba rako kana kumirira kuzorora kwerombo rakanaka. Kunda anokumhan'arira, kuvapwanya, nekutsika pamusoro pevane hasha zvine utsinye. Kukunda zvinoreva kutonga zvitunha zvisingaverengeki. ” - Toua Tokuchi
'Izvo zvakaderera mukana zvinoreva kuti haisi zero.' - Toua Tokuchi
“Kuita basa kutora marwadzo acho pauri. Zvinoreva kutakura kurwadziwa kupfuura zvakanzwiwa nevamwe nekuda kwekukanganisa kwako. ” - Toua Tokuchi
Zvese ZveZvekutanga Zvikuru Zvakambonzwikwa Kubva kuYugioh
Zvese ZveZvakanakisa Zvinyorwa Zvinotorwa Kubva kuHumambo Hwenhau weAlslan